नेपाली भाषामा गद्य कवितालाई हाँक्न प्रारम्भ गर्ने कवि रिमाल आफैं छन्दकवि थिए । « Salleri Khabar
नेपाली भाषामा गद्य कवितालाई हाँक्न प्रारम्भ गर्ने कवि रिमाल आफैं छन्दकवि थिए ।
पिता लोकनाथ भण्डारी र माता तुलसी भण्डारीको सुपुत्रको रुपमा मेघौली, चितवनमा जन्मिएका मनोज भण्डारी हाल अध्ययनको शिलशिलामा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसीमा रहँदै आइरहेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट संस्कृत व्याकरणमा शास्त्री( गोल्ड मेडलिस्ट)को अध्ययन सकेका उनले सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आचार्य अध्ययन समेत सकीसकेका छन् ।
समकालीन नेपाली कविता फाँटका प्रष्ट अनुहार एवम् प्रभावशाली छन्द कवि भण्डारीको ‘ईश्वरलाई चिठी (कविता सङ्ग्रह-२०७४)’ प्रकाशित छ । तन्नेरी पुस्ताहरूले छन्दमा कविता लेख्न र पढ्न छाडे भन्नेहरूलाई भण्डारीको कविताकृति ‘ईश्वरलाई चिठी’ गतिलो उदाहरण हो । यस सङ्ग्रहमा विभिन्न छन्दमा लेखिएका ५२ कविता सङ्ग्रहित छन् ।
कवि मनोज भण्डारीको कविता संग्रह – ईश्वरलाई चिठी
प्रस्तुत छ, सर्जक अफ द विकका लागि कवि मनोज भण्डारीसँग सल्लेरी खबरका राजु झल्लु प्रसादले गरेको साहित्यिक चर्चाको संक्षिप्त अंश:
राजु- हामीकहाँ छन्दमा कविता लेख्नेले गद्यमा लेख्नेलाई नमान्ने र गद्यमा कविता लेख्नेले छन्दमा लेख्नेलाई नमान्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ । गद्द र छन्दको तुलानात्मक अध्ययन/विस्तार/बुझाई कस्तो हुनुपर्छ ? भाषा संरक्षणमा छन्द कविताको भूमिका कस्तो रहन्छ ? छन्दको मनोवैज्ञानिक प्रयोजन के हो ?
मनोज- कसैले कसैलाई नमानेर कसैको महत्ता घट्ने अथवा कसैले मान्दैमा भइहाल्ने पनि त होइन नि, है । मेरो अध्ययनले काव्य तीनथरि छन् भन्छ : गद्य , पद्य र चम्पू । तीनवटै उत्तिकै विशिष्ट छन् ।
छन्द कविताले हामीलाई शब्दहरूप्रति चनाखो बनाउँछ । शब्दहरूप्रति नभनौँ, शब्दहरूप्रति पनि । शब्दसँग मजाले खेल्न नसकी छन्द लेख्न सकिँदैन । गद्यमा भावलाई शब्दले साथ दिए पुग्छ । शब्द खेलाउन सक्नु प्लस प्वाइन्ट हो । छन्दमा चाहिँ त्यो पहिलो सर्त हो । अर्को कुरा छन्दको उच्चारण मानक उच्चारण हो । लिखितको लेखनीय उच्चारण । गद्यको उच्चारण मौखिक हुन सक्छ (नहुन पनि ) । त्यसैले भाषा संरक्षणमा छन्द अधिक उपयोगी छ ।
सङ्गीतमैत्री हुनाले छन्दका कुरा रुचिकर हुन्छन् । छन्द सुन्नासाथ कण्ठस्थ हुन्छ । त्यसैले हाम्रा ऋषिहरूले इतिहास छन्दमा लेखेर महाभारत बनाए । कथा छन्दमा लेखेर पुराण बनाए । गणित पनि छन्दमा । व्याकरण पनि छन्दमा । खगोल, भूगोल पनि छन्दमा । गुन्गुनाउँदा गुन्गुनाउँदै छन्द कण्ठस्थ हुँदाहुँदै कतिबेला हृदयस्थ भयो पत्तै हुँदैन ।
राजु- गद्य कवितामा निश्चित ढाँचा हुँदैन, अनुप्रास हुँदैन र छन्द पनि हुँदैन । र, पनि अहिले गद्द कविताकै हालीमुहाली देखिन्छ । उसो भए ‘छन्दहीनता‘ पनि काव्यात्मक गुण हो ? यदि तपाइले गद्द कविता बारे बोल्नुपर्यो कसरी बोल्नुहुन्छ ?
मनोज- नेपाली भाषामा गद्य कवितालाई हाँक्न प्रारम्भ गर्ने कवि रिमाल आफैं छन्दकवि थिए । छन्द लेख्न धौ भयो (उनको रचनाबाट स्पष्ट हुन्छ ), गद्य समाते । यसको अर्थ सबै गद्यकविहरू छन्द नजान्ने भन्ने होइन नि । गद्य लेख्न धेरैको रुचि हुनुमा गद्य सजिलो लाग्नु (हुनु होइन ) हो । म चाहिँ गद्य अझै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने ठान्छु । संरचना छन्दको अप्ठ्यारो छ । संरचना र गुदी दुवैमा फिफ्टि-फिफ्टि परिश्रम छन्दमा गर्नुपर्छ । गद्यमा भने शत प्रतिशत गुदीमा परिश्रम गर्नुपर्छ । त्यसैले शायद ।
राजु- फ्रान्सका आधुनिकतावादी कवि पल भ्यालेरीको एउटा कथन छ- ‘छन्दको संरचनाले नै कविलाई कविता लेखाउँछ ।‘ त्यसो हो ? तपाइको आफ्नो अनुभवले के भन्छ ? कविताको संरचना, विषय र टुङ्गाइ गर्दाखेरका अनुभवहरू (कविताको गर्भ वास या त्यसको गर्भ विकास) को बारेमा केहि कुरा बताईदिनुहोस् न !
मनोज- छन्द भन्ने जिनिस आफैमा गण्डकीजस्तो हुन्छ । बग्नु त्यसको स्वभाव हो । पहाड, खोच, समथर, उपत्यका, अधित्यका हुँदै बग्नु । गद्य बरु मरुभूमिको हिँडाइ हो । बगाइ त आफैंमा कविता हो नि । मरुभूमिको बाटो आफैंमा कवितामय हुँदैन । त्यसका लागि अतिरिक्त प्रयास चाहिन्छ । भ्यालेरीको कुरामा मेरो सहमति छ ।
मसित विषयै छैन । विचार नै छैन । तर पनि कुनै कविता सुन्नासाथ लेखूँ लेखूँ हुन्छ । त्यसको प्रतिफल सुन्दर भएको छ ।
राजु-सूचना र प्रविधिले मारेको फड्कोबाट नेपाल ( नेपाली साहित्य ) पनी अछुतो छैन । भर्चुअल दुनियाँमा नेपाली साहित्यको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दो छ । समकालीन अवस्थालाई नियाल्दा अनलाइनको माध्यमद्वारा नेपाली साहित्यको उत्थान भइरहेको हो ? नेपाली साहित्य र प्रविधिबीच कस्तो तादात्म्यता भेट्नुहुन्छ ?
मनोज- अब कविता छाप्न प्रकाशक चिन्नु पर्दैन । सम्पादकलाई चिठी लेख्नु पर्दैन । फेस्बुकका कमसेकम पाँच हजार पाठक/श्रोतासामु पुग्ने गरी छाप्न सकिन्छ । त्यो पनि यथेष्ट । यो त उपलब्धि हो । यसको अर्को/अँध्यारो पाटो त छँदैछ । जुन उपाय/साधन अपनाए पनि साध्य सुन्दर भइदिनु भनेको सुन्दर कुरा हो ।
प्रस्तुत छ, भण्डारीका तीन कविता:
क्यै सम्झौता, तमसुक थिए च्यातिए आज फेरि
मेरा कापीकलम मसितै मातिए आज फेरि
मानौं कालो गगन चिरियो, वेग दर्केर आयो
मेरो मान्छे पर पर थियोे, आज फर्केर आयो
चिच्याएथ्यो मसित उसको मौनता एक मानु
जानेबेला मसँग उसले क्यै नछाडेर जानु
जाऊ भन्ने अवसर भने जिन्दगीले दिएन
मेरो मान्छे मसित सजिलै टाढिएको थिएन ।
भुल्नैपर्ने सयसय थिए हेतु जल्ले मलाई
थोरैमात्रै अवसर थिएँ “सम्झिऊँ?” भन्नलाई
मैलाई नै अब त उसले भुल्नुपर्ने भुलेछ ।
यस्तै गल्ती यदि भइदिए, दोषमा दोष के छ ?
मेरा खुट्टासित हजुरको दूरता नाप्नलाई
मेरा आँखासित हजुरको मौनता सुन्नलाई
त्यस्तो केही उपकरण या यन्त्र भन्ने थिएन
हुन्थ्यो ता यो समय यतिको क्लिष्ट बन्ने थिएन ।
यस्तै गाँठा, हृदयभरिका खोल्न धेरै कुरा छन् ।
सिङ्गो मान्छे कम समय हो, बोल्न धेरै कुरा छन् ।
थाँती राखौं सब अब कतै भन्न चाहन्छ जस्तो
मानौं मेरै अब सब भुली बन्न चाहन्छ जस्तो ।
एउटा चस्को हृदय नजिकै दुख्दथ्यो पोल्दथ्यो जो ।
क्वैली जस्तै मधुर तर क्यै दूरमा बोल्दथ्यो जो
बाल्दै आयो सघन निशिमा एक विश्वास दीप
मेरो साथी पवन जसरी आज आयो समीप ।
हेर्थ्यो कोही मतिर जहिल्यै फर्किँदै फेरि फर्की
फर्क्यो अर्को दिशतिर उही, स्वप्नको देश सर्की
ऊ फर्केको छ अब मतिरै, फर्किने फेरि होला
तर्क्यो, फर्क्यो नगर सँगिनी, बित्न जाला कि चोला
कैले एउटा रनवन रुँघे फूल-काँडा भएर
कैले रोए तट सरितका तुल्य टाढा भएर
कैले आए बहन तटकै साथमा साथसाथ
के हो अर्को चरण यसको? मोहनिद्रा ? प्रभात ?
कवि : मनोज भण्डारी
चौतारीमा, वटविटपको फेदमा एक छाता
केही बोल्दै छ कि नसुनिने शब्दमा, ए विधाता
आफ्नो स्वामीसित छ यसरी आज यो टाढिएको
बस्दाबस्दै कि त छुटिगयो या थियो छाडिएको । १
गोठालाले वनतिर हुँदा घामको भुल्न घाउ
ओढ्यो होला, अनि भुलिदियो टाढिँदा वस्तुभाउ
मानौँ जाडो भुलिदिन भनी ओढियो एक बर्को
बिर्स्यो बर्को तलतल हुँदा एक तानेर सर्को ।२
या गर्मीले तपतप झरे स्वेदका बिन्दुधार
बग्दै गर्दा सलल नजिकै वेगले पानभार*
छाता राखी युवक वटकै छेउमा, दौडिएर
खोला नाघ्दा, जलसँग बगे भेलमा पौडिएर ।३
या पर्देसी प्रियजनसितै हर्ष टाढा भएकी
आइन् कोही नव विरहिणी, बेसहारा भएकी
रोइन् देखी वरपिपलका साथ स्वामी* बसेको
थाहा पाऊन् नयन कसरी, एक छाता खसेको ।४
लाखौं पूजा स्तुति अनि दुआ प्रार्थनाले छुँदैन
ए आँखाको जलकण, कुनै धर्म तेरो हुँदैन ?
कस्तै दूरी पनि तँ सजिलै फड्किई सामु आई
घोच्ने गर्छन्, भन न कुन हो यादको देश, भाइ ! ५
फर्के फर्के घरतिर दशैं, चाड आयो तिहार
खै फर्केनन् शहरतिरका, पुत्र छन् चार चार
सुस्केराले यति भनिसकी पल्टिएका हुँदा हुन् ।
चौतारीमा अझ पनि उनै वृद्ध आई रुँदा हुन् ।६
“छाता ओढ्ने ?” सँग शुरु भयो प्रेम मानौं परार
“एउटै छानामुनि” अटिनुमा विघ्न आए हजार
छोटा लामा पल अब छुटे, छोटिए मार्ग, नाता
छुट्दाछुट्दै कि त छुटिगयो हातको एक छाता ।७
देवनारायण यादव उवाच
मानौं छोडिदिएछ रङ्ग कविले पोतेर पानाभरि ।
पुर्खाको पसिना र रक्त छ अझै हाम्रो सिमानाभरि ।
त्यो मेट्ने यदि गर्छ साहस कुनै, रोकेर रोकिन्छु म ?
हावा बन्छु, उडाइदिन्छु, त्यसकै नामेट गर्दिन्छु म ।
भेडा हुन् जनता भनेछ कसले हामीहरू शेर हौं ।
आफ्नो शक्ति, अदम्य तागत सबै बिर्सी सुतेका थियौं ।
ब्वाँसा,स्यालहरू गिज्याउन यतै आए, चलाए कति ।
के होला अब सिंहका निकटमा जानेहरूको गति ।
के हो सङ्घ, प्रदेश ? बुझ्दिनँ म ता, स्वाधीनता बुझ्छु म ।
धर्ती ईश्वर हो म भक्त यसको, यै ढोग्छु यै पुज्छु म ।
मेरो मन्दिरमा पसेर जब यी जिस्क्याउँछन् दुश्मन ।
ए आमा ! म कुना पसूँ कि खुकुरी बोकेर गर्जूँ? भन ।
के छाती यदि देश धर्धर रुँदा मान्दैन केही पिर ।
भो साथी, किन चाहियो दसगजा दुख्दा नदुख्ने शिर ।
रातारात लुटेर देश रिपुले खोसेर लाँदा पनि ।
निद्रा लाग्छ भने अजिङ्गरजसै, धिक्कार हो जीवनी ।
नेपाली जन हूँ, म हैन “मदिसे”, हो देश मेरो पनि ।
जन्मेँ किन्तु मधेस, पर्वतजसै छाती छ मेरो पनि ।
आफ्नो देश बचाउने प्रण गरूँ, सङ्घर्ष यस्तो गरूँ ।
मेरो अन्तिम श्वाससम्म म लडूँ, नेपाल भन्दै मरूँ ।